Manohana an’i Okraina sy ny vahoaka Okrainiana i Sarajevo · Global Voices teny Malagasy
Notakian'ny mpanao fihetsiketsehana ny hanitaran'ny governemanta Bosniaka ny fijanonan'ireo Okrainiana mpitsoa-ponenana ara-dalàna
Voadika ny 05 Mey 2022 4:46 GMT
Vakio amin'ny teny srpski, Español, Nederlands, українська, Italiano, English
Ankizilahy roa mitàna sora-baventy mivaky hoe “Voninahitra ho an’i Okraina” sy “Atsaharo ny ady any Okraina!” nandritra ny fihetsiketsehana fandriampahalemana tao Sarajevo tamin'ny 9 Aprily 2022. Sary: Balkan Diskurs/Benisa Bibuljica, nahazoana alalana.
Nivoaka voalohany tao amin'ny Balkan Diskurs, tetikasan'ny Foibem-pikarohana Aorian'ny ady (Post-Conflict Research Center Balkan Diskurs) (PCRC) ity lahatsoratra ity. Navoakan'ny Global Voices indray ny dika nasiam-panovana ho ampahany amin'ny fifanarahana fifampizaràna votoaty.
Tamin'ny andro manamarika ny faha-30 taonan'ny fahirano lava indrindra tao amin'ny renivohitra iray teo amin'ny tantara maoderina, olom-pirenen'i Sarajevo an-jatony no nivoaka nanohitra ny herisetran'i Rosia tamin'i Okraina, nandefa hafatra miavaka fangorahana ho an'ny vahoakan'i Okraina. Fanampin'izany, nandrisika ny manampahefana ao Bosnia sy Herzegovina (BiH) ny Sarajevana mba hahafahan'ireo Okrainiana mpitsoa-ponenana hijanona ara-dalàna ao amin'ny fireneny mandritra ny 30 andro mahery tsy misy fepetra fangatahana fialokalofana.
Nilaza i Benjamina Karić, ben'ny tanànan'i Sarajevo, fa mampahatsiahy ny fijalian'ny olom-pirenen'i Sarajevo, ary koa ny Bosniana sy Herzegoviniana rehetra nandritra ny ady tamin'ny taompolo 1990 ny fijalian'ny vahoaka Okrainiana isan'andro.
“Miteraka fihetseham-po sarotra ao anatinay izany ary mamoha ny fangorahana amin'ny fanohanana ny vahoaka Okrainiana,” hoy i Karić tamin'ny fihetsiketsehana “Mijoro miaraka amin'i Okraina izahay”, izay nokarakarain'ny Foibem-pikarohana Aorian'ny Ady tamin'ny 9 Aprily tao Sarajevo.
Benjamina Karić, ben'ny tanànan'i Sarajevo. Sary: Balkan Diskurs / Benisa Bibuljica, nahazoana alalana
Nilaza i Velma Šarić, filoha sady mpanorina ny Foibem-pikarohana Aorian'ny Ady fa andraikitr'ireo rehetra matoky ny rariny, ny hitsiny, ny fandeferana ary ny fandriampahalemana ny fanohanana an'i Okraina. “Ny fanohanana an'i Okraina dia fanohanana ireo niharam-boina sy ireo tafavoaka velona izay niaina na mbola miaina tsy rariny, ny heloka bevava ary fandripahana — manomboka ao Bosnia sy Herzegovina ka hatrany Rwanda, Syria, Yemen sy ny maro hafa,” hoy i Šarić.
Velma Šarić, filoha sady mpanorina ny Foibem-pikarohana Aorian'ny Ady. Sary: Balkan Diskurs / Benisa Bibuljica, nahazoana alalana.
Nangataka tamin'ny Filankevitry ny Minisitra ao amin'ny BiH izy mba hamahana ny olan'ny fijanonan'ireo Okrainiana mpitsoa-ponenana ao amin'ny faritanin'i BiH, sy ny hanitarana ny fe-potoana ahafahan'izy ireo mijanona ao amin'ny firenena mandritra ny 30 andro mahery.
Serhii Miniailo, Charge d'Affaires ao amin'ny Masoivohon'i Ikraina ao Bosnia sy Herzegovina. Sary: Balkan Diskurs / Benisa Bibuljica, nahazoana alalana.
“Ny zava-misy hoe miaraka aminay sy manohana anay aorian'ny 45 andro izao tontolo izao — tsy vitan'ny hoe manohana anay amin'ny teny ihany fa amin'ny fanangonana fanampiana maha-olona ihany koa — dia tena zava-dehibe ho an'ny Okrainiana. Midika izany fa handresy isika », hoy i Serhii Miniailo, Mpisahana ny Raharaha ao amin’ny Masoivohon’i Okraina ao amin’ny BiH. Nanampy izy fa “eo anilantsika ny fahazavana ary misy fanantenana ho amin'ny fahamarinana”.
Nitranga teo amin'ny lampihazo manoloana ny Teatra Nasionaly ao Sarajevo ny fihetsiketsehana am-pilaminana. Nilaza i Dino Mustafić, talen'ny Teatra Nasionaly, fa samy manana adidy ara-moraly isika rehetra mba hiandany amin'i Okraina.
Dino Mustafić, director of the National Theater in Sarajevo. Photo: Balkan Diskurs / Benisa Bibuljica, used with permission. Dino Mustafić, talen'ny Teatra Nasionaly ao Sarajevo. Sary: Balkan Diskurs / Benisa Bibuljica, nahazoana alalana.
Nanamarika i Mustafić:
“Fantatsika fa tsy misy olona mahazo hafatra amin'ny fotoana maharitra. Ny fivoriantsika androany no porofo ho an'ny Okrainiana fa tsy irery izy ireo. Mampahatsiahy ny seho tamin'ny taona 1990 ny sarin'ny ady rehetra avy ao Okraina. Fantatsika tsara kokoa noho ny eto Eoropa rehetra ny zava-mitranga any. “
Nanazava i Tatjana Milovanović, talen'ny fandaharana ao amin'ny Foibem-pikarohana Aorian'ny Ady fa, tamin'ny fanafihana an'i Okraina, izay nanomboka tamin'ny 24 Febroary 2022, dia sivily an'arivony no namoy ny ainy ka anisan'izany ny ankizy 130 mahery. Fanampin'izany, olona an'hetsiny no namoy ny tranony, tranobe an'arivony no rava, anisan'izany ny tsangambato nasionaly, hopitaly ary trano manan-tantara.
“Nokarakarain'ny Tanànan'i Sarajevo, ny fiarahamonim-pirenena ary ny olom-pirenena ity fihetsiketsehana am-pilaminana ity ho fanohanana ny vahoakan'i Okraina sy ireo rehetra tsy manan-tsiny niharan'ny fankahalana, fisaratsarahana ary fampihorohoroana,” hoy i Milovanović.
Ireo mpandray anjara tamin'ny fihetsiketsehana mihazona sora-baventy mivaky hoe “Atsaharo ny ady,” “Ho tohina izahay rehefa rava i Putin,” “Miara-mijoro amin'i Okraina izahay,” “Fandriampahalemana,” “Sarajevo Okraina,” “Voninahitra ho an'i Okraina,” ary “Atsaharo ny ady any Okraina!” Sary: Balkan Diskurs / Benisa Bibuljica, nahazoana alalana.
Maro ireo olo-malaza ara-kolontsaina sy ara-politika ary koa ireo solontena ara-diplaomatika avy any Grande-Bretagne, Norvezy, Polonina, Aotrisy, Slovakia, Soeda, Repoblika Tseky ary Etazonia no nanatevin-daharana ireo nijoro teo anoloan'ny Teatra Nasionaly nandritra ny hetsika “Manohana an'i Okraina izahay”.
Mpandray anjara tamin'ny fihetsiketsehana manohana an'i Okraina ao Sarajevo. Sary: Balkan Diskurs / Benisa Bibuljica, nahazoana alalana
Nilaza i Saša Magazinović, solontenam-panjakana sady solontenan'ny Antoko Demaokraty Sosialy (SDP), fa mihoatra ny adidy ara-moraly ao Sarajevo, sy ao BiH koa ny miteny manohitra ny herisetra Rosiana ao Okraina. “Voatery manokana hiloa-bava izahay hanohitra ny herisetra Rosiana — izahay rehetra tohina noho ny fahanginan'ny hafa izay nivadika taminay,” hoy i Magazinović.
Fampisehoana lokanga nataon'i Belma Alić. Sary: Balkan Diskurs/ Benisa Bibuljica, nahazoana alalana.
Nahitana fampisehoana lokanga nataon'i Belma Alić ny hetsi-panoherana milamina “Mijoro miaraka amin'i Okraina izahay”.
Tamin'ny 20 Aprily, namaly ny fitakiana fototry ny fihetsiketsehana ny governemanta tamin'ny alalan'ny fandaniana didim-panjakana mamela ny olom-pirenena Okrainiana hijanona ao Bosnia sy Herzegovina mandritra ny enim-bolana tsy mila mandalo dingana fangatahana fialokalofana. Afaka hitarina ity fijanonana vonjimaika ity noho ny antony maha-olona mifandraika amin'ny ady ao Okraina. Fanampin'izany, nanomboka ny 17 martsa, nanome trano maimaim-poana ho an'ireo mpitsoa-ponenana sahirana ao amin'ny Hotel Walter ny governemantan'ny vondrona federasiona BiH .
Sary nampindramin'i Giovana Fleck.
Raha hijery vaovao bebe kokoa momba ity lohahevitra ity, jereo ny fitantarana manokana ataonay momba ny Rosia manafika an'i Okraina